I-Calacatta quartz slab noma itshe le-calacatta quart
I-Calacatta Quartz Slab
I-Carrara Quartz Slab
I-Quartz Slab Esimhlophe Okumsulwa Nokumhlophe Okukhulu
I-Quartz Slab Crystal Mirror & Grain
I-Quartz Slab Multi Color
Iyaziwa ngokuba mhlophe kwayo okugqamile kanye nokwakheka okumangalisayo, iCalacatta ilungele izindawo ezinkulu, ezihlanganisa izindonga, phansi kanye nezihlambi.customizable. Sicela usithinte!
Okuqukethwe kwe-quartz >93%
Isikhathi sokuthumela 2-3 amaviki ngemva kokuthola inkokhelo
Ukucwebezela > 45 Degree
I-MOQ Ama-oda wesivivinyo esincane wamukelekile.
Amasampula Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa
Inkokhelo 1) 30% wenkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho uyibona.
2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemuva kokuxoxisana.
Ikhwalithi yokulawula Ukubekezelela ukujiya(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mm
I-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha
Izinzuzo Abasebenzi abanolwazi nethimba labaphathi elisebenzayo.
Yonke imikhiqizo izohlolwa izicucu yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha.
1. Ukuqina okuphezulu: Ukuqina kwe-Mohs kwendawo kufinyelela kuLeveli 7.
2. Amandla acindezelayo aphezulu, amandla aqine kakhulu.Akukho okumhlophe, akukho deformation futhi akukho crack ngisho evezwe elangeni.Isici esikhethekile sikwenza kusetshenziswe kabanzi ekubekeni phansi.
3. I-coeficient yokwandisa ephansi: I-nanoglass enkulu ingathwala izinga lokushisa ukusuka ku -18℃C ukuya ku-1000 C ngaphandle kwethonya esakhiweni, umbala kanye nesimo.
4. Ukumelana nokugqwala kanye nokumelana ne-asidi ne-alkali, nombala ngeke ucime futhi amandla ahlala efana ngemva kwesikhathi eside.
5. Akukho ukumuncwa kwamanzi nokungcola.Kulula futhi kulula ukuhlanzwa.
6. Non-radioactive, imvelo friendly futhi reusable.
“Ikhwalithi Ephezulu” ·“Ukusebenza Kahle Kakhulu”
I-APEX inolwazi olunzulu emhlabeni futhi itshale imali eningi ekwethuleni imigqa yokukhiqiza ehamba phambili emhlabeni wonke kanye nemishini yokukhiqiza eyindida evela ekhaya naphesheya.
Manje i-Apex yethule isethi ephelele yemishini efana nemigqa emibili ye-quartz yamatshe e-automatic platen kanye nemigqa emithathu yokukhiqiza yezandla Emithathu .Sinemigqa yokukhiqiza engu-8 enamandla nsuku zonke yama-slabs angu-1500 kanye namandla onyaka angaphezu kwezigidi ezingu-2 SQM.
Yonke imikhiqizo yethu isekelwa iwaranti enomkhawulo yeminyaka eyi-10.
1. Lesi siqinisekiso sisebenza kuphela kumatshe e-quartz e-APEX athengwe efektri yase-Quanzhou Apex Co., Ltd. hhayi enye inkampani yesithathu.
2. Lesi siqinisekiso sisebenza kuphela kumatshe e-Apex quartz slabs ngaphandle kokufaka noma inqubo.Uma unezinkinga, okokuqala pls thatha izithombe ezingaphezu kwezi-5 kufaka phakathi i-slab egcwele ngaphambili nangemuva, izingxenye zemininingwane, noma izitembu ezinhlangothini nokunye.
3. Lesi siqiniseko ASIBAMBIZI noma yikuphi ukukhubazeka okubonakalayo kwama-chips kanye nomunye umonakalo omkhulu womthelela ngesikhathi sokwenziwa nokufakwa.
4. Lesi siqinisekiso sisebenza kuphela kuma-slabs e-Apex equartz anakekelwe ngokuvumelana neziqondiso ze-Apex Care & Maintenance.
Itshe le-quartz elimhlophe le-calacatta (Into NO. 8872)
I-Quartz Countertops yesimanje /Okwengeziwe okumhlophe kwengemuva lokuthungwa kanye nemigqa emnyama /Itshe le-Calacatta Quartz(ITEM: APEX-2005 APEX-2010 APEX-2011 APEX-5015 APEX-8690)
Ubunjiniyela Bekhwalithi Ephezulu I-Calacatta White Quartz Stone Slab APEX-8868
I-Calacatta quartz surface ( Into No. Apex 8860)
IQuartz Countertops engcono kakhulu yomkhiqizo Intengo yeQuartz Countertops Itshe lequartz elimpunga IQuartz Marble Price IEngineered Stone Market AmaQuartz Countertops Slabs